Blogs - Vanguard
About Vanguard Myanmar
Vanguard Cloud Services
Vanguard Connected Technology
We haveateam of experts with diverse experience. Read their thoughts and opinions on the industry experienced and knowledge. We would like to hear from you also.
အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်ပြီး Talent တွေကို မွေးထုတ်ပါ
Posted by Vanguard on: June 15, 2020
ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်း တွေမှာ “Talent” ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုကြပါတယ်။ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောရရင် လုပ်ငန်းအတွက်ချက်ချင်းအကျိုးပြုနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူတွေ ဒါမှမဟုတ် ရေရှည်မှာအကျိုးပြုနိုင် ဖို့အလားအလာရှိတဲ့သူတွေ Organizational Performance မှာ ကောင်းသောအပြောင်းအလဲပြုလုပ် နိုင်တဲ့သူတွေကို Talent တွေလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ Talent Management ဆိုတာက Organization ကိုအကျိုးပြုနိုင်မယ့် (Value ပေးနိုင်မယ့်) သူတွေရဲ့ တိုးတက်မှု၊ ကြာရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ဆွဲဆောင်ခြင်း၊ နေရာချခြင်း၊ Engagement လုပ်ခြင်း စတာတွေကို စနစ်တကျ စီမံခန်ခွဲခြင်းကို ခေါ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းအတွက် အဓိကနေရာကနေ Read More >
Project Cost Management အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက် ၇ ချက်
Posted by Vanguard on: April 23, 2020
Project Manager (သို့မဟုတ်) Finance Executives တယောက်အနေဖြင့် project ၏ ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အမြတ်အစွန်းကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းသည်စိန်ခေါ်မှူတစ်ရပ် ဖြစ်နိုင်ပါ သည်။ အကယ်၍သင်သည် excels သုံးနေသေးပါက Project ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်စီမံကိန်းတစ်လျှောက်လုံးကုန်ကျစရိတ်များကိုတိုင်းတာရန်အတွက် Project Management Solution ကိုပြောင်းလဲသုံးသင့်သောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ Project Management Solution တစ်ခုကိုမရွေးချယ်ခင် Cost Management အတွက် ရှိထားသင့်သောအချက်များကို ဖော်ပြပေး လိုက် ပါသည်။ Project Management Solution အတွက်အသုံး၀င်နိုင်သောအချက်များ ၁။ ကုန်ကျစရိတ်ခန့်မှန်းခြင်း Project Read More >
SAP Business ByDesign User များအတွက် Covid 19 အခြေအနေ၌ အသုံးပြုလို့ရသည့် Function များ
Posted by Vanguard on: April 20, 2020
ယခုအခါနိုင်ငံများသည် Corona ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားသောနည်းဗျူဟာ များကိုကျင့် သုံးနေကြပါသည်။ ယခုလို အခြေအနေတွင် ကျွန်တော်တို့ သည် လူအများစုအတွက် အိမ်မှ အလုပ် လုပ်ခြင်းဖြင့် social distancing ကို လေ့ကျင့်သင့်ပါသည်။ ဤခက်ခဲသောအချိန်များအတွက် SAP Business ByDesign Cloud ERP သည်အကောင်းဆုံး လုပ်ငန်းသုံးsolution တစ်ခု ဖြစ်ပါ သည်။ အချိန် model များနှင့် planning များလုပ်ခြင်း လက်ရှိအခြေအနေတွင် အောက်ပါအရေးကြီးသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို SAP Read More >
Business Intelligence Solution ဆီသို့ လျှောက်လှမ်းချိန်တန်ပြီလား
Posted by Vanguard on: June 19, 2019
သင့်လုပ်ငန်းဟာလည်း တခြားလုပ်ငန်းအများစုလိုပင် ဗျူဟာမြောက်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချမှတ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့။ ဒါ့အပြင် အဲဒီလိုဗျူဟာမြောက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းကောင်းချနိုင်လောက်စရာ DATA အချက် အလက်တွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါပေမယ့် ဒီအချက်အလက်တွေကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းမလဲ၊ ဘယ် Tool က အထိရောက်ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာ တွေးရခက်နေပြီလား။ ဒါဆိုရင်တော့ Business Intelligence Solution (BI) ရှိပါတယ်။ Business Intelligence (BI) ဟာဆိုရင် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ များပြားပြောင်းလဲလာတဲ့ Data အချက်အလက်တွေကို တိကျ မှန်ကန်စွာခွဲခြမ်းသုံးသပ်နိုင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို Read More >
The Role Of Warehouse Management System In Supply Chain ကုန်စည်စီးဆင်းမှုကွင်းဆက်အတွင်းမှ Warehouse Management System၏ အခန်းကဏ္ဍ
Posted by Vanguard on: January 20, 2019
Warehouse Management System (WMS)ဆိုသည်မှာ supply chain အတွင်း logistics ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုး၊ ကုန်စည်ဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်းပိုင်းမှ ကုန်စည်များသိုလှောင်ခြင်း ပို့ဆောင်ပေးခြင်းစသည်တို့ကိုတိကျမှန်ကန်စေရေးအတွက် ထိရောက်မြန်ဆန်ပြီး ချောမွေ့အောင် smart နည်းပညာဖြင့် အချိန်နှင့် တပြေးညီ intelligent dataကို စီမံခန့်ခွဲသော စနစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ယခုခေတ်တွင် SMBs အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပင် logisiticsကို စုစည်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကုန်စည်များကို နေ့တွင်းချင်း အရောက်ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် e-commerce စသည်တို့အတွက် warehouse inventory management အရေးကြီးကြောင်း Read More >
What retail CEOs need to know to lead their business into the future စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ဦးဆောင်ဖို့အတွက် လက်လီအရောင်း CEO များ သိသင့်တဲ့အရာ
Posted by Vanguard on: October 26, 2018
Unicode Version World Retail Congress မှ The DNA of Future Retail CEO အမည်ရှိ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပြောကြားမှုအရ လက်လီအရောင်း CEO တွေ လက်ရှိနဲ့အနာဂတ်ကာလမှာ လိုအပ်တဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ ထိပ်တန်းနည်းပညာစွမ်းရည်နှစ်ခုဟာ ၁။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအားလုံးကို နားလည်ခြင်း ၂။ အချက်အလက်တွေကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး မဟာဗျူဟာကျတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်ခြင်း တို့ ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့ စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲဟာ လက်လီအရောင်း CEO တွေရဲ့ အနာဂတ်မှာ အချက်အလက်တွေကို Read More >
Work and Life Balance in the Digital Age
Posted by Vanguard on: August 31, 2018
Work and Life Balance in the Digital Age Today’s technological devices (mobile devices, video conferencing, etc.) can help us to work flexibly from various locations and around the clock, but it can also lead towardsadepreciation of Read More >
Do u know ERP can save your Business Cost?
Posted by Vanguard on: August 24, 2018
Do u know ERP can save your Business Cost? Operation costs Making allocation of work more efficient Manufacturing and material planning Process performance Admin costs All customer information in one place on one customer record No chasing paperwork, with Read More >
ကျယ်ပြန့်လာတဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေး စနစ်အတွင်း Digital ဆီသို့ အရှိန်အဟုန်ကောင်းစွာဖြင့် ကူးပြောင်းလာသော HR အခန်းကဏ္ဍ။
Posted by Vanguard on: July 31, 2018
အသေးစားနဲ့အလတ်စား လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ အခုအချိန်ဟာ အပြောင်းအလဲအတွက် လုပ်ကိုလုပ်သင့်နေတဲ့ အချိန်ကာလ မျိုးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ နည်းပညာအရ အဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ စီးပွားရေးပုံစံတွေ၊ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အလိုအလျောက် လည်ပတ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေဟာ စံနမူနာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်းတွေ အနေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဘက်ပေါင်းစုံကနေ ပြန်လည် စမ်းစစ်သုံးသပ်ပေးနိုင်တဲ့ ပုံစံမျိုးကိုသာ ရှေ့ဆက်အသုံးပြုသွား ဖို့ ဆန္ဒရှိလာကြပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေဟာ နည်းပညာရဲ့ရိုက်ခတ်မှုက အသေးစားလုပ်ငန်းလေးတွေအပေါ်မှာ ဘယ်လို သက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်သလဲဆိုတာကို စောင့်ကြည့်လေ့လာနေကြပြီး လူသားအရင်းအမြစ်တွေကို တိတိကျကျ ထိရောက် မှုရှိစွာ Read More >
HR ကို Digital ဆီသို့ ပြောင်းလဲရာတွင် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အချက်များ။
Posted by Vanguard on: July 17, 2018
ယနေ့ခေတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေနဲ့ ရှိနေတဲ့ မျှော်မှန်းချက်ကတော့ လူ့အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ နည်းပညာ တစ်ခုမှာ ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှု ပြုလုပ်ဖို့အတွက် အာမခံချက် တစ်ခုရှိနေဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အဆိုပါ အာမခံချက်ကတော့ ဝန်ထမ်းတွေအတွက် ရှေ့ဆက်ရမယ့်ပန်းတိုင်များကို စဉ်ဆက်မပြတ်လမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းပညာလမ်းကြောင်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး အဆိုပါနည်းပညာအနေဖြင့် ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို စီမံခန့်ခွဲစေနိုင်ရမယ်ဆိုတာအပြင်၊ ၎င်းတို့ရဲ့ အသက်မွေးမှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို အစီအစဉ်ချမှတ်စေ နိုင်ဖို့နဲ့ ပညာရပ်အသစ်တွေ သင်ယူစေနိုင်ဖို့၊ လူနေမှုဘ၀ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာစေဖို့ကိုပါ အမြဲထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထပ်မံပြီးတော့လဲ Read More >
Shop House 9, Junction Square, Pyay Road, Kamayut Township, Yangon, Myanmar
Copyright Vanguard Myanmar Co., Ltd. © 2020 Designed by: ERA Myanmar